Fomba 3 mitolona amin'ireo orinasa amin'ny finday | Martech Zone
Fomba fiady 3 ataon'ny orinasa amin'ny finday
Alakamisy, May 31, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Mirongatra ny fananganana finday fa vitsy ny orinasa mamaly. Ireo izay mahita valiny mahavariana amin'ny fampiasam-bolany… ireo izay tsy tafajanona kosa. Ny hafatra amin'ity infographic ity dia tsy afaka nazava.
Ny paikady, vendrana. Na ny CIO marani-tsaina sy ny orinasa voadinika tsara aza dia manana olana rehefa mandray ny fivezivezena izy ireo. Ary na dia vaovao sy sarotra aza ny fitaovana finday sy ny fampiharana amin'ny fomba tsy mitovy amin'ny PC sy ny lozisialy mpizara, ny fanamby manakorontana ireo mpitarika IT dia mazàna tsy dia misy teknika ary manana orinasa sy paikady kokoa. Izany dia araka ny fikarohana nataon'ny IDG
Sintomy ny Whitepaper lalina ao amin'ny SAP.
Manararaotra data eo noho eo miaraka amin'ny RapLeaf
Miasa ve ny fanaovana doka amin'ny lalao sosialy?
May 31, 2012 ao amin'ny 1: 34 PM
Rehefa manatsara hatrany ny teknolojia finday ity dia mety ho lasa olana lehibe kokoa ho an'ny karazana orinasa rehetra. Ireo manam-pahaizana amin'ity sehatra ity dia hanao tsara ara-bola mandritra ny taona vitsivitsy. Misaotra tamin'ny fampahalalana mahasoa.